Soo dejisan Adaware Antivirus Removal tool 1.0.0.1 – Vessoft
WindowsNidaamkaMaaraynta faylkaAdaware Antivirus Removal tool
Bogga rasmiga ah: Adaware Antivirus Removal tool
Adaware Qalabka Ka-Qaadista Antivirus – qalab aan rasmi ahayn ee alaabada amniga ee Adaware. Barnaamijka waxaa loogu talagalay kiisaska qalabixinta qaldan ee habka baska habka loo yaqaan ’antivirus’ ee hababka laga saarayo Windows oo laga yaabo inay ku guuldareystaan inay ogaadaan hannaanka hiddaha ’antivirus’ ee nidaamka. Adaware Antivirus Qalabka Raadinta si dhakhso ah ayuu u ogaanayaa oo gabi ahaanba ka saaraysaa antivirus ku rakibtay kombiyuutarka oo ay ku jiraan raadadka diiwaanka nidaamka, faylasha ku-meel-gaarka ah iyo macluumaadka liisanka. Adaware Qalabka Ka-qaadista Antivirus wuxuu leeyahay interface si fudud loo isticmaali karo oo uma baahna isticmaale inuu yeesho xirfado gaar ah si uu u tirtiro antivirus.
Ka-saarista fayraska oo buuxa
Nadiifinta baaritaanka antivirus ee nidaamka
Ka saarida macluumaadka liisanka
Soo dejisan Adaware Antivirus Removal tool
Faallo ku saabsan Adaware Antivirus Removal tool
Adaware Antivirus Removal tool Xirfadaha la xiriira